NYI LYNN SECK 18+ DEN: September 2009
လက်ဖျား ငွေသီးလို့ အိမ်သူကြီး မျက်နှာဖြီးရတယ်
Posted by NLS at 9/30/2009 10:33:00 PM0comments Links to this post
သောကြာနေ့မှာ ကမေဿဘာဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်ကို ခဏသွားပါမယ်။ အဲဒီမှာ Barcamp Phonen Penh ကျင်းပနေတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ MCPA ရဲ့ လေ့လာသူအနေနဲ့ သွားမှာပါ။ ဒီလို Barcamp မျိုးလေးကို ကျွန်တှောတို့ မြန်မာပြည်ထဲမှာလည်း အခါအားလျှောစွာ ကျင်းပနိုင်ဖို့ နိုင်ငံခြားက Organizer တွေက မြန်မာပြည် ရောက်ရှိစဉ်မှာ MCPA EC များနဲ့ လာရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ အကြံဉာဏ်တွေ အကူအညီတွေ ပညာရှင်တွေ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့၊ ဖိတ်ကြားပေးနိုင်ဖို့ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းပါတယ်။ MCPA အနေနဲ့ ကျင်းပဖြစ်မလား MCF အနေနဲ့ ကျင်းပဖြစ်မလားဆိုတာ မသေချာသေးပါဘူး။
အာရှနိုင်ငံ အတှောများများမှာ Barcamp လေးတွေ ကျင်းပနေတာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုပဲ ကျန်တော့တယ် ထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားက ပွဲတွေမှာ လူပေါင်းများစွာ ပါဝင်ပြီး အောင်အောင်မြင်မြင် ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာကို လေ့လာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒာကြောင့် ကျွန်တှောတို့ မြန်မာပြည်မှာ လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း စံချိန်မီ ကျင်းပနိုင်အောင် ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ Barcamp မှာ Expert, Non Expert ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ လူအားလုံးဟာ ကိုယ်သိထားတဲ့ IT Technology နဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို ဝေမျှကြတဲ့ ပွဲလေးတွေပါပဲ။ ကမေဿဘာဒီးယားမှာ ကျင်းပတာ ဆိုပေမယ့် နိုင်ငံတကာက ပညာရှင်တွေ Barcamper တွေ စိတ်ပါဝင်စားသူတွေ အားလုံး လာရောက်ကြတာမျိုးပါ။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ ကျင်းပဖြစ်ရင်လည်း ဒီလို နိုင်ငံအနှံ့က လူတွေပါ ပါနိုင်အောင် ကြိုးစားကြမယ်လို့ အားခဲထားပါတယ်။
ကမေဿဘာဒီးယားကို သွားမယ်ဆိုလို့ အဲဒီမှာ လေ့လာသင့်တာတွေကို အကြံပေးကြတဲ့၊ စာအုပ်တွေ လှမ်းပို့ပေးကြတဲ့၊ လာကြိုပေးမယ်ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေများကို အရမ်းပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကမေဿဘာဒီးယားနဲ့ ဗီယက်နမ်ကို ကျွန်တှော အရမ်းပဲ သဘောကျမိတယ်။ သွားချင်နေတာ ကြာပြီဖြစ်ပေမယ့် အခွင့်အလမ်း မသာဘူး ဖြစ်နေခဲ့တာ အခုလို သွားရောက် လေ့လာခွင့် ရတာကို အရမ်းပဲ ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ဖနွမ်းပင်က အပြန်မှာ ဘန်ကောက်ကို ဝင်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဘန်ကောက်က သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေကို တွေ့ခွင့်ရမယ်ဆိုလည်း အထူးပဲ ဝမ်းသာမိမှာပါ။ အထူးသဖြင့် ဘန်ကောက်မှာ မြန်မာဘလှောဂါတွေ တှောတှောများများ ရှိကြပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာ ဆုံနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်။ ပြန်ရောက်တော့မှပဲ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်ရေးပါတော့မယ်။ လောလောဆယ်တော့ ထိုင်းဗီဇာ၊ ကမေဿဘာဒီးယားဗီဇာ ကိစဿစတွေနဲ့ ရှုပ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေ ပို့ပေးတဲ့ အင်ဖှောမေးရှင်းတွေ ဖတ်ကြည့်နေတာနဲ့တင် သွားရမှာကို တှောတှောလေး စိတ်လှုပ်ရှား နေမိပါတယ်။ ဟိုးတုန်းက ဂျွမ်းလူမျိုးများ ဖြစ်ခဲ့သလား မသိဘူး :D
Posted by NLS at 9/30/2009 09:45:00 PM0comments Links to this post
Microsoft ကနေ ဒီနေ့မှာပဲ Microsoft Security Essentials ကို အားလုံးအတွက် အခမဲ့ ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပထမအကြိမ် ဇွန်လကုန်ပိုင်းမှာ Beta Version ထုတ်ခဲ့စဉ်က လူပေါင်း ၇၅၀၀၀ အတွက်သာ စမ်းသပ်သုံးစွဲဖို့ ကန့်သတ် ထုတ်ဝေပေးခဲ့တာပါ။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ Version 1 အနေနဲ့ မိုက်ခရိုဆော့(ဖ်)က အကန့်အသတ်မရှိ ပေးလိုက်ပါပြီ။
ကျွန်တှော့ စက်ထဲမှာက အရင်က NOD32 ကို တင်ထားပါတယ်။ ဒါကို ကျွန်တှောသုံးခဲ့တာ ၂၀၀၆ ကတည်းကဆိုတော့ သံယောဇဉ်လည်း တွယ်မိနေပါသေးတယ်။ နောက်တစ်ခုက NOD32 ဟာ အခြား Antivirus Program တွေနဲ့ မတူတဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေ ရှိပါတယ်။ Virus Definition တွေကို နေ့တိုင်းလိုလို Update လုပ်ပေးနေတာမို့ ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးမျိုး စပှေါတာနဲ့ တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက် အတွင်းမှာ ဒီစနစ်က ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်နေပါပြီ။ Scan လုပ်တဲ့ နေရာမှာလည်း အတွင်းထဲထိ ရောက်သလို မြန်ဆန်မှုလည်း ရှိပါတယ်။ NOD32ကို စတင်သုံးစွဲမိကတည်းက အခုအချိန်အထိ Virus, Trogans, Spy, Malware စတာတွေကို မကြောက်ရတော့တာ ဒီနေ့အထိပါပဲ။ သုံးစွဲခဲ့ဖူးသမျှ AV Software တွေထဲမှာ NOD32ဟာ အကောင်းဆုံးပါ။ ဒါကြောင့်လည်း NOD ကို ဖျက်ရမှာ လက်တွန့်နေခဲ့မိတယ်။
ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတာ တစ်ချက်က စက်တစ်လုံးထဲမှာ Anitivirus Software တွေ အမျိုးမျိုး တပ်ဆင်ထားတာမျိုး မလုပ်မိဖို့ သတိပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျ အနေနဲ့ စက်တစ်လုံးမှာ Firewall (လုံထိန်း) တစ်ခုနဲ့ Antivirus (ပိုးသတ်လက်နက်) တစ်ခု စုစုပေါင်း နှစ်မျိုး ရှိဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ သုံးလေးငါးမျိုး လျှောက်တင်ရင် စက်ကို လေးလံစေသလို၊ ဒုကဿခလည်း ပေးပါတယ်။ အချို့စက်တွေမှာ ဝင်းဒိုးတက်မလာတော့တာ ကြုံရပါတယ်။ ဒါကြောင့် MSE ကို သုံးကြည့်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ဆီက NOD32 ကို အရင်ဖျက်ရတာပါ။ စမ်းသပ် သုံးစွဲကြည့်ချင်လို့လည်း ပါပါတယ်။
အရင်တုန်းက ထုတ်ထားတဲ့ Windows Defender ကိုတော့ ကျွန်တှော သိပ်သဘောမကျပါဘူး။ Virus ရန်ကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်းလည်း သိပ်မရှိဘူးလို့ ထင်မိသလို Interface ကလည်း ရှုပ်ထွေးတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ အခု ထုတ်လိုက်တဲ့ ဟာကတော့ ဒီဇိုင်းအနေနဲ့ ရိုးရိုးလေးနဲ့ သေသပ်သလို လုပ်ဆောင်မှု အပိုင်းတွေကလည်း မခက်ခဲတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တခြား ပရိုဂရမ်တွေကို သုံးနေရင်းနဲ့ စက်ကို Scan ဖတ်ကြည့်တဲ့ အခါမှာလည်း အခြားစနစ်တွေလို သိသိသာသာ နှေးကွေးသွားတာမျိုး မဖြစ်ပါဘူး။ ကွန်ပျူတာစွမ်းအင်ကို အနည်းဆုံး အသုံးပြုပြီး အထက်မြက်ဆုံး အကာအကွယ် ပေးမယ်လို့ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်က ဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ဗိုင်းရပ်(စ်)တွေ၊ မောဝဲ(လ်) တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကိုပဲ အကာအကွယ် ပေးသွားမှာပါ။ အခြား Enterprise Software တွေလိုတော့ Utilities တွေ စုံစုံလင်လင် ပါမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Symantec ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာချုပ် ယန်းမက်ဂါးကတော့ MSE ဟာ တှောတှောလေးကို အဆင့်နိမ့်သေးတဲ့ စနစ်တစ်ခုလို့ နှိမ့်ချဝေဖန်မှု ပြုထားပါတယ်။ MSE ဟာ Virus တွေကို သိနိုင်စွမ်းအား အလွန်ကောင်းပေမယ့် အဲဒီလို သိနိုင်စွမ်းအား ကောင်းမှုကြောင့် တခုခုမှာ ပြသဿသနာ ကြုံလာနိုင်တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ကျွန်တှော့ရဲ့ အတွေ့အကြုံအရတော့ ဗိုင်းရပ်(စ်)တွေ၊ စပိုင်ဝဲ(လ်)တွေ ကိုက်ခံရတယ် ဆိုတာဟာ သုံးစွဲသူရဲ့ အဓိက အားနည်းချက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေ အဓိက ရှိတဲ့ နေရာတွေ ဆိုတာကလည်း Porn Site တွေ၊ Serial Key ရှာတဲ့ ဆိုက်တွေပါ။ နောက်တစ်ခုက သူများက လင့်တစ်ခု ပေးတိုင်း သဘောတွေ့ပြီး နှိပ်ကြည့်ချင်ကြတဲ့ သူတွေပါ။ ကိုယ့်ကို ပေးတဲ့ သူဟာ ဘယ်လောက် စိတ်ချရသလဲ။ ကိုယ်သွားမယ့်ဆိုက်ဟာ ဘယ်လောက် စိတ်ချရမလဲ ဆိုတာ သေသေချာချာ မသိခဲ့ရင် သူများလင့်ပေးတိုင်း လိုက်မနှိပ်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Porn Sites တွေကို သွားတယ် ဆိုရင်လည်း အကောင်ပလောင် မရှိတဲ့ ဆိုက်ဟာ ဘယ်ဟာတွေလဲ ဆိုတာကို ဝါရင့် ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်များ သုတေသနသမားများ၊ လေ့လားစူစမ်းအား ကောင်းသူများ၊ ဝါသနာရှင်များ ထံမှာ မေးမြန်းပြီးမှ သွားသင့်ပါတယ်။ Porn တွေရှာမယ် ဆိုပြီး Porn, xxx စတဲ့ Keywords တွေနဲ့သာ ရှာမယ် ဆိုရင်တော့ စက်ဟာ အကောင်ကိုက်ခံရဖို့ ၁၀၀% သေချာပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဘယ်လောက်ခင်ခင် ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်စက်မှာ USB Stick လာတပ်သုံးမယ်ဆိုရင် Scan စစ်ဖြစ်အောင် စစ်ပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ မယုံပါနဲ့။ .exe နဲ့ ဆုံးတဲ့ Link တွေ ဆိုရင်တော့ ဘာလေးလဲလို့တောင် မစူးစမ်းပါနဲ့။ ဝေးဝေးရှောင်ဖို့ လိုပါမယ်။
ကိုယ်ဟာ ဟိုဟိုဒီဒီ နေရာမရွေး သွားတတ်သူ ဆိုရင်တော့ အခုမှ အသစ်ဖြစ်တဲ့ ဒီကောင်ကို သုံးမယ့်အစား၊ အခြား Enterprise Level Antivirus ဆော့ဝဲလ်တွေကို အသုံးပြုဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ Freeware အနေနဲ့ဆိုရင် Avira တို့ Avast တို့ ရှိပါတယ်။ ဒီကောင်ကို သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ ဝင်းဒိုးဟာ Genuine Windows ဖြစ်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီကောင်ကို တစ်လ နှစ်လလောက် သုံးစွဲကြည့်ပါမယ်။ အခက်အခဲတွေ ကြုံလာရင် အားလုံးသိနိုင်အောင် ကျွန်တှော ထပ်ပြောပြသွားပါမယ်။
Microsoft Security Essentials also supports Windows XP Mode in Windows 7. For more information see the system requirements for Windows XP Mode in Windows 7
Download: Microsoft Security Essential
Posted by NLS at 9/30/2009 08:54:00 PM0comments Links to this post
Labels: Download, Technology
တချို့ခွေးက ပတ်ဝန်းကျင် ဘာဖြစ်နေနေ ထကို မထဘူး မဆိုင်သလို နေတယ်
တချို့ခွေးက ဟောင်တော့ ဟောင်တယ် ရန်မမူတတ်ဘူး
တချို့ခွေးက ဟောင်လည်း ဟောင်တယ် ရန်လည်း မူတယ်
တချို့ခွေးက မဟောင်ဘူး အလစ်ချောင်းပြီးမှ ဆွဲတယ်
တချို့ခွေးက ဘယ်သူဖြတ်သွားသွား ရန်မူတတ်တယ်
တချို့ခွေးက သူ့ကို ရိုက်လည်း ပြန်မကိုက်ဘူး
တချို့ခွေးက သူ့ကို ရိုက်ရင် ပြန်ကိုက်တယ်
တချို့ခွေးက ကိုက်တော့ မကိုက်ရဲဘူး အစွယ်လေးဖြဲဖြဲပြီး မာန်ဖီပြတတ်တယ်
တချို့ခွေးက အိမ်ရှင်တွေကို မကိုက်ဘူး သူများကိုတော့ ကိုက်တယ်
တချို့ခွေးက အိမ်ရှင်တောင် ပြန်ကိုက်တတ်သေးတယ်
တချို့ခွေးက သူများခှေါတိုင်းသွား ကျွေးတိုင်းစားတယ်
တချို့ခွေးက ပိုင်ရှင်ကကိုက်ဆို ဘာမှမစဉ်းစားဘူး ကိုက်တာပဲ
တချို့ခွေးက ပိုင်ရှင်ကခိုင်းတောင် ဘာခိုင်းမှန်းမသိအောင် တုံးတယ်
တချို့ခွေးက ခွေးအချင်းချင်းတောင် ဖျံကျတတ်သေးတယ်
အသက် ၂၉အထိ ရှင်သန်နေထိုင်လာခဲ့ရာ ကာလမှာ ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ ခွေးအမျိုးမျိုး အကြောင်းပါ။ ဒီအထဲက အချို့ခွေးတွေတော့ အမဲလုံးမိပြီး သေကုန်တာ တှောတှောများတယ်။ ဒီအထဲ မပါသေးတဲ့၊ ကျွန်တှော မသိသေးတဲ့ ခွေးအမျိုးအစားတွေ ရှိသေးရင်လည်း ကွန်မန့်မှာ ရေးခဲ့ကြပါဦး။ စိတ်ဝင်စားလို့ပါခင်ဗျာ။
Posted by NLS at 9/27/2009 11:35:00 PM2comments Links to this post
Posted by NLS at 9/27/2009 02:35:00 AM2comments Links to this post
Myanmar Government announced 5000 Kyat Bill will be released on October 1
Justafew minute ago, National radio announced that Myanmar Government will release 5000 Kyat-Bill on coming October 1. This news will definitely shake the market price tomorrow . The remarkable color of that bill will be Red and illustrated White Elephant on front and Supreme building at rear. So better go now to buy some basic needs.
အခုလေးတင်ပဲ ၈ နာရီ ရေဒီယို သတင်းကနေ အောက်တိုဘာ တစ်ရက်နေ့မှာ ၅၀၀၀ ကျပ်တန် ငွေစကဿကူ ထုတ်မယ်လို့ ကြေငြာသွားပါတယ်။ ငွေစကဿကူမှာ ထင်ရှားတဲ့ အရောင်ဟာ အနီရောင်ဖြစ်ပြီး အရှေ့ဘက်မှာ ဆင်ဖြူတှောပုံ အနောက်ဘက်မှာ လွှတ်တှောပုံ ပါမယ်လို့ ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ဈေးတွေတော့ တက်တော့မှာမို့ အခုပဲ ဝယ်စရာရှိတာလေးတွေ ဝယ်ဖို့ရာ စီးတီးမတ် ပြေးလိုက်ဦးမယ်။
Posted by NLS at 9/24/2009 08:24:00 PM 1 comment Links to this post
ကျွန်တှောတို့ Myanmar Blogger Survey 2009 ကောက်နေတာ အရင်လ ကတည်းကပါ။ ဘလှောဂါတွေ အများကြီး ရှိပေမယ့် အခု Survey ပြီးဆုံးခါ နီးတဲ့အထိ လူပေါင်း ၃၅ဝလောက်ပဲ ပါဝင် ဖြေဆိုကြတဲ့အတွက် အားမလို အားမရတော့ ဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှောတို့ ဒီဆာဗေးကို ၂၉ ရက်နေ့ တိတိမှာ ပိတ်ပြီး ရလာတဲ့ Result ကို ထုတ်ပြန်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မဖြေရသေးတဲ့ သူတွေ ရှိခဲ့ရင်လည်း ဝင်ရောက်ပြီး ဖြေဆို ပေးကြပါလို့ အကူအညီ တောင်းချင်ပါတယ်။ လူများများ ပါဝင် ဖြေဆိုခြင်းဟာ ရလာဒ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ဖို့ အရေးအကြီးဆုံး လိုအပ်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု လက်ရှိ ဖြေဆိုထားတဲ့ ဘလှောဂါတွေ ဘာတွေ ဘာတွေပြောကြတယ်ဆိုတာကို ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဝင်ရောက် ဖြေဆိုကြသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Result တွေ ထွက်လာတဲ့ အခါမှာလည်း ရလာဒ်တွေဟာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ချက်။ ဒီဆာဗေးကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး ပေါက်တက်ကရ ဝင်လုပ်တဲ့ သူတွေ Spam လုပ်တဲ့ သူတွေကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ မကူညီချင်နေပါ မနှောက်ယှက်ပါနဲ့ လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
Just learning to develop for blogging
အမိမြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြပါ....
ဘလောဂ်ဆိုတာ လွတ်လပ်မှုပါ ...
Good to share and express thoughts and feeling freely. Good to know lots of informations. Good to meet with new people.
It'sawindow to express our feelings.
Expressing my knowledge and thoughts.
ဘာသာရေး ဗဟုသုတ များကို သာ ဖှောပြ တင်ပြပါသည်။
Nice to express one's opinion and share with others. It isanew window in life!
I like it that sharing network society.
Relax ..share ..success
I like blogging and I want to share migrant life of Thailand.
Blogging makes me free to oppress my opinion, my feelings and my thoughts.
ဘာရယ်တော့ ဟုတ်ပါဘူး တစ်ခုခုလုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်တာပါ
I'm doing this blog for my personal note for my life and want to share travel information. Also want to get new blogger friend. Haveanice day and beautiful time.
I love to read blogs and I like to make blogging but I am justalazy bone. My blog is not an active blog. If it's not so called blog sorry to beaparticipant here in your survey. I just read your post in thought that I could make some help by participating. I amahuge fan of you bro NLS. All the best to you.
SHARE AS MUCH AS U CAN !!!!!!
မကြာမီ မြန်မာဘလောက်ဂါ လောကကြီးက အောင်မြင်မှု ရရှိလာတော့မှာပါ။ အားလုံးပဲ ဝိုင်းဝန်းကူညီ ပံ့ပိုးပေးကြပါ
nice, can share resources to people
I wrote when I am free. That's why, I wrote very less, lesser than onceaweek.
အပူတွေ အန်ထုတ်ပေးရာ သို့မဟုတ် အေးမြငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေ ဖလှယ်ရာ
မြန်မာ့ITလောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အနေဖြင့် IT နည်းပညာများနှင့် ပတ်သက်သော အသိပညာ ဗဟုသုတများ ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်သူလူထုတွေ လိုအပ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တရားမျှတမှုကို IT နည်းပညာဖြင့် နည်းလမ်းများစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
မြန်မာ့ဘလော့ လောကကြီး ဒီထက်ပိုမိုတိုးတက်စေချင်ပါတယ်။ ဘလော့ရေးတဲ့ လူတွေကလဲ ဖတ်တဲ့လူတွေ အကျိုးကို ဖြစ်စေမယ့်၊ ဗဟုသုတကို ရစေမယ့် ရေးသားမှုမျိုးတွေ ဒီထက်မက ပိုမို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Expression of mind, shared information in interested field such as IT, Design & Multimedia, Learn something to promote and connecting to the world!
To share knowledge, experiences and express feeling
As like nokia (connecting people)
Face the world formanarrow space.
Meet new fris, get ideas ,
It begins taking up our precious time but it's worth.
A type of relaxations, sharing opinions, meeting other people with same interests.
Nothing special, It is justablog
Just sharing my feeling
Currently my blog is down but I am very buzy to restore it. sorry about that
Free to express our emotion
It makes me relax. I keeps some technical notes on the blogs. I can access those wherever I go. And I also keey my dirary. I can recall my past day.
You've asked too much informations!
A place to open up our inside
Stimulate my mind and sharign about my life, knowledge and environment especially to all my loving friends and family who away from me to keep my update to let them know. And as Virtual World to Communicate with some others Burmese people.
ကိ်ုယ့်ဘာသာကိုယ် ကဗျာရေးတတ်သည်ဟုယူဆ၍ ခပ်တည်တည် ဖြင့် ကဗျာရေးနေသောသူဖြစ်သည်။
Blog isaplace for sharing emotion,feelings,and ideas.Blocks should not be influenced by government,anti-government,even,scholars or salaried journalists. It should be real free spaces for everyone.
The most effective way to communicate with the online community.
To develop our blog society
Good to have blog for Splashing thoughts and beliefs
Nice and pleasant work.
ကိုယ် ဖန်တီးထားတဲ့ စာတွေ ကဗျာတွေကို မျှဝေ ခံစားနိုင်အောင် တင်ထားတာပါ။
Knowledge-sharing Space/tool towards good governance and civic empowerment
I emphasized on Theravada Buddhism.I would like to share right concept and way of thinking on Buddha's teaching to new generation.
Yes, I ever study any IT form Blogs. So the blogs are my teachers. Thanks for that!
For Interent Cafe in myanmar
We can share knowledge
Feel like i haveahouse on air,express my feeling,sharing some thing i have learnt(even for myself) the best way to learn is bloging as my opinion..
ဘလော့ ဆိုတာ အိပ်မက်တွေကို ချရေးပြထားတာပါ
Thing; shouldn't be, but must have
I hate the following message. (Access Denied (policy_denied) Your system policy has denied access to the requested URL. For assistance, contact your network support team. cos of this I can't update my blog
Sharing information,experience,knowledge and Expressing idea and thoughts
ပေးတဲ့သူက ပေးပေမယ့် ယူတတ်မှ ရနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခု။ လိုအပ်မှုတွေ များနေသေးတယ်ဆိုတာ သိနေရတဲ့အချိန်။
It is like window.
Entering the V World.
It is push button publishing. Good for people who want to share information and opinions.
မြန်မာစာပေလောကတွင်လည်း သိပဿပံမောင်ဝ တို့ခေတ်ကကဲ့သို့ တစ်ခေတ်ဆန်းခဲ့ပေပြီ။
I wanna get general knowledge for blogging.
Thanksalot for ur Surveying :)
Blogging is necessary for everybody to know and to share information, experience, knowledge, opinion and others to each other.
Good4sharing knowledge
မိမိမှာရှိသမျှတွေကို လည်း ပြန်လည်မျှဝေချင်ပါတယ် .. ထပ်ပြီးတော့လည်း လေ့လာပါဦးမယ် ..
မြတ်နိုးမှုတွေ ထုတ်ဖှောပြခွင့်ရတဲ့အတွက် အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာရပါတယ်။ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ အရာတွေ ရှင်သန်နေတာကို လူတိုင်းက လိုလားကြမှာပဲလေ။ ကျနှောလည်း လူတွေအတိုင်းပဲ ရှင်သန်နေပါတယ် ခင်ဗျာ။
ပျှောစရာတွေ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေ ကိုရင်ဖွင့်တဲ့နေရာလေးပေါ့ တစ်ယောက်တည်းနေရတဲ့လူတွေ အတွက်တော့ ကောင်းမွန်တဲ့အဖှောပါ။
ဇှောဂျီစာလုံးဖြင့် မြန်မာလို ဘလော့ဂ်ရေးသားခြင်းသည် အင်တာနက်သုံးသူ မြန်မာများအတွက် တခေတ်စမ်းစေခဲ့ပါသည်။
Good for indivudual who want to share via internet.
Sharing and feeling together
ဘလော့ရေးခြင်းအားဖြင့် ဘလော့ဖတ်ခြင်းအားဖြင့် နည်းပညာဗဟုသုတ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာ Hiphop နဲ့ပတ်သတ်တဲ့နေရာတစ်ခု
Just want to blog asablogger.
အတွေးအမြင်၊အယူအဆတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထုတ်ဖှောခွင့်ရတဲ့ နေရာလေးပါ။
Semi-exit of mind
အနာဂတ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို blogging ကို အခြား ခေတ်မီနိုင်ငံများနှင့်အတူ ရင်ပေါင်တန်းနိုင်စေ ချင်ပါတယ်။ blogger.com ကိုလည်း free ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
I want to use blog in Myanmar easily.
မသေမချင်းတော့ ဘလော့ဂ် ရေးနေဦးမှာပဲ။ နည်းတာနဲ့ များတာပဲကွာသွားမယ်
Good. I like and enjoy. I think so freedom.
Nice for sharing my creations.
Nice for us. Nice to express and share my opinions,ideas and thoughts. So freedom to create my wish.
To share information. don't hide the information.
It's fun while last. Motivation is the main factor in regular updating of your blog.
feel like just talking to someone
My Blog is about to love Kachin people and Culture and also about Christianity.
လူသားတွေအတွက် အလိုအပ်ဆုံး သတင်းနှင့် အနုပညာတရပ်။လူသားအကျိုးပြု မီဒီယာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
To share Knowledge and skill..
It's fun! :D
I just do love blogging!!!
I didn't blog much, it's like I just gave itatry. I posted onlyafew posts on my blogs, some posts I like and some posts I thought they are just rubbish. As I do not have any specific skills and knowledge to share, I tried to share my person feelings, but sometiems it was just uncomfortable to let others know about me. As I wanted to but I wasn't able to do, I admire those who blog effectively.
I write it to channel my inner thoughts and express myself with photos and media.
Blogging is just sharing knowledge and experience found in our life.
နည်းပညာပိုင်းကိုများများကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လေ့လာခွင့်ရတဲ့ အတွက် အထူးဝမ်းမြောက်မိပါတယ်...
I feel that I ama"thin-kwel" bird in the Burmese blogging world because I blog in English. But it's ok ;)
Very good for us,
I can show my mind to others. it'sapart of freedom of expression. good!
Many people to know about right view of buddha teaching.
စာရေးဝါသနာပါသူတွေအတွက် ကိုယ့်ဝါသနာအရ ပျှောရွှင်စွာစာလေးတွေရေးနိုင်လို့ တစ်လွဲအသုံးမပြုဘူးဆိုရင်တော့ ကောင်းသော အရပ်အဝန်းလေးဖြစ်ပါသည် ။
Just to express my arts, poems and feelings but blogging also help me get new friends, learn more things, develope my knowledge and sharing feeling with the same hearts
အထွေအထူးတော့ မရှိပါဘူးဗျာ။ ဝါသနာပါရာ စိတ်အပန်းဖြေစရာ ကဗျာတွေ ရေးခွင့် ဖတ်ခွင့်ရနေတဲ့ တစ်ခုထဲသော အွန်လိုင်း ဥယျာဉ်လေး ဖြစ်နေလို့ပါပဲ ။ ရေးခွင့် ရသလောက်တော့ ရေးနေ ဖတ်နေ ဖြစ်ဦးမှာပါ။
Blogging is not private thing because everyone can read, give comment, and share their opinions. So, it is not as save as personal diary book.
Hope all share what they know with all over the world!!!
I think it's dominant media, new platform.
Living with simply wonder.
It's always nice to share the art i have created and let people inspired...
Well... I think I love to blog and I will continue blogging. I will try to getadomain name in the near furture.
It's impressive that Myanmar youths started out as personal profile then, became very active in politic and many other areas.
Blogging is fast losing me as twittering is much easier in this fast-paced world.
The space for my social and political activities, and sharing my idea and knowledge as well.
မျှဝေ တွေ့ဆုံဖို့ အလျှင်မြန်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံးပါ
Relax and meet new people
Rasically blogging give me relax
EXPRESSION OF MY FEELINGS , THAT'S ALL
စာရေးနေရရင် ပျှောလို့ ရေးတာပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ့်စာတွေကို သူများတွေ ပြန်ဖတ်စေချင်တာ ကျနှော သိထားသလောက် အသိလေးတွေကို ဝေမျှပေးချင်တာကြောင့် ရေးပါတယ်
Very good this idea
Blog isalife
၂၀၀၇ ခုနှစ်က ဘလော့စရေးပါတယ်။ ပို့စ် ၁ဝဝလောက်ထိ တင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ၂၀၀၈ ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ စုစုပေါင်း ၁၄ ပို့စ်ပဲ တင်လိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာတော့ ဘလော့က သေတောင်သွားပြီလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဘာပို့စ်မှကို မတင်ဖြစ်တော့တာ။ ဒါပေမယ့် ဘလော့တွေတော့ အချိန်ရသလို ဝင်ဖတ်ဖြစ်နေဆဲပါ။ ဆက်ရေးဖို့တော့ အရှိန်ပြန်ယူနေပါတယ်။ ဘလော့ စလုပ်တုန်းကတော့ တင်ချင်တာတွေ စွတ်တင်ခဲ့တော့ ကိုယ့်ဘလော့က ဘယ်အမျိုးအစား ဘာရယ်လို့လည်း သတ်သတ်မှတ်မှတ် မထားခဲ့မိပါဘူး။ ဘယ်ထဲမှ ထဲ့မရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ အခု ဒီ ဆာဗေးလေး ဝင်ဖြည့်ပေးချင်လို့ ဖြည့်လိုက်ရခြင်းပါ။ ကိုယ့်ဘလော့ကို မရေးဖြစ်တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အချို့ အချက်အလက်တွေကို အနီးစပ်ဆုံး ယူဖြည့်လိုက်ရပါတယ်။ ကျေးဇူး
ကျွန်တှော့အတွက်တော့ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တှောက စာဖတ်တာနဲ့ စာရေးတာ ဝါသနာပါတော့ ခုလိုမျိုးရေးခွင့်ရှိနေတာ အတှောကို ကျွန်တှော့အတွက် အဆင်ပြေနေတယ်။ နောက်ပြီး တစ်ယောက်တည်း နေရတဲ့ အထီးကျန်မှုကနေ အနဲနဲ့ အများတော့ လွတ်တာပေါ့။ =)
Just to relief my feeling .... Nth else
အမြင် မတှောတာတွေ အတွေ့အကြုံတွေ မျှဝေချင်လို့ ရေးတဲ့ ဘလော့ဂ်သက်သက်ပါ။
Information from Mogok
အတိုအစများ အိပ်စက်လိုက်ရမှာ နှမျောပေမယ့် ညက ငါ့အလိုကျ မလှပခဲ့ဘူး။ ဟိုးအဝေးကို ငေးပြီး အနာဂါတ်ကို လွမ်းချင်ပေမယ့် မှားနေတဲ့ စိတ်ကူးဆိုတာ တွေးမိတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ပျက်တယ်။ ဝင်သက်ထွက်သက်မှတ်လည်း ပျံ့လွင့်နေတဲ့စိတ်ကို မစုစည်းနိုင်ဘူး။ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်မှန်း မသိတော့တဲ့ အဆိပ်ငွေ့တွေ ငါရှုရှိုက်ရင်း ငါ့ရင်ဘတ်က အောင့်တတ်လာပြီ။ ငါဟာဘာလို့ မိုက်လို့ ကောင်းနေတာလဲ။ အချိန် အလေအလွင့်များစွာ၊ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် များစွာ၊ လေထဲမှာ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက် များစွာ၊ ဟောဒီ အသုံးမဝင်တဲ့ငါ။ ခဏခဏ ပြန်စရပေါင်း များနေတဲ့ ဘဝမှာ၊ အနေအထိုင် မတတ်လို့ ပျက်ခဲ့ရတဲ့ ဘဝမှာ၊ နားလည် သိတတ်ပြီလို့ ထင်မိနေတဲ့ဘဝမှာ ဘယ်မှာလဲ စိတ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုတွေ။ အတဿတ၊ ရမဿမက်၊ သာယာပျှောရွှင်မှု၊ အတိုအစတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ဘဝ ဘယ်မှာလဲ အနှစ်သာရတွေ။ ဖြုန်းတီးနေခဲ့ရင်းနဲ့ပဲ ဘဝက ဒုတိယအရွယ်၊ သေပါမယ် ဆိုရင်တောင်မှ ဘဝက လောက်လောက်လားလား သေလို့မရသေးဘူး။ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်သိတော့ သေဖို့တောင် ကြောက်နေရတဲ့ ဘဝ တွေးမိတိုင်း ရှက်နေရတယ်။ အမှားကို မြင်ပေမယ့် အမှန်မရောက်သေးတဲ့ ဘဝ အသုံးမကျတဲ့ အတိုအစ ဒီလိုနဲ့ ပြီးသွားရမှာလား။ မေးခွန်းပေါင်းများစွာ၊ အတွေးပေါင်းများစွာ၊ အိပ်မရတဲ့ညပေါင်းများစွာ၊ အတိုအစပေါင်းများစွာ၊ လိုအပ်မှုများစွာ၊ ခါးသီးမှုများစွာ၊ မုန်းတီးမှုများစွာ၊ ကြီးစွာသော နောင်တပေါင်းများစွာ၊ မနက်ဖန်ပေါင်းများစွာ၊ ညကမလှပပေမယ့် ငါကအိပ်စက်လို့ မရဘူး။
The reson why i addict to internet
To express our feeling to feel good
I think blog make me to interest web technology such as CMS and Jounalism.
I think Blog is our hope .
Telling people what I see and think on some things and occasions, taking responsibility on my work, keeping silent on the trade I've never believed.... well, it's about freedom and it's voice. I like 'blogging'.
I want to share my opinion to readers.
Just Knowledge Share
Great to express individual feeling and knowledge. We promote ourselves and no longer need anyone to help to become famous. Just look at Nyi Lynn Seck.
A blog should not give pressure to its author.
Window for thought
စိတ်ကူးတွေ ရှင်သန်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာ။ အနာဂတ်ရဲ့ စတုတဿထမဏဿဍိုင်။
I want to share everything.
My blog isapersonal one. You don't have choice for that topic!
Recreation, but Waste of time, not enough time to sleep, away more & more from society
သမိုင်းအကြောင်းကို ဝေမျှချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းကို မြန်မာပြည်သူ တွေကို သိစေချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်သမိုင်းကြောင်းကို သိတာဟာ အကျိုးအယုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ကိုယ်သိတာတွေ မျှဝေချင်တယ်... ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုတွေကို
Blogging is free to share our opinions
It's kind of art.
We should write the truth to know people.
Healing hard times
Blogging is free and can open my mind really
To share good things
I'm happy to share my opinions.
ဝါသနာတူအချင်းချင်း အမြင်ခြင်း ဖလှယ်ရာမှသည် အနာဂတ်ပန်းတိုင် တစ်ခုဆီသို့ အရောက်လှမ်းနိုင်မည်ဟု မျှောလင့်ချက်ဖြင့် ယုံကြည်ထားသည်
Blogging gives us the opportunity to exchange information, news and publish the art works (online) to the readers inavery quick and effective way.
That is part of my life
Blogging is great.. You can share not only your opinions but also information up to date. Nowadays, blogging is playing vital role in many aspects.. So, i love blogging..
Blogging, good or not is depend on yourself.
Blogging is more than logging on the web. It is likeatool to create everything. But depends on how people use.
share what i know and what i think
I like blogging and writing.
Blogging isakind of Media Explosion. A turning point of the Mainstream Media.
If you areablogger and if you wanna participate in Myanmar Blogger Survey 2009, just click Here.
Posted by NLS at 9/23/2009 11:36:00 PM0comments Links to this post
Labels: Blog, Blogger, Blogging, Statistic
Location on Google Earth: 19°48'56.88"N, 96°17'1.21"E
အဲဒီမြို့ဟောင်းဟာ တကယ်တော့ နာမည် အတိအကျ မသိရတဲ့ မြို့ဟောင်း တစ်ခုပါ။ ဆရာဦးအောင်မြင့်က ဒါကို ရေဇင်းအနီးက သရက်ခုံရွာလေးနားမှာ ရှိတာမို့ သရက်ခုံ (ရေဇင်း) မြို့ဟောင်းရယ်လို့ နာမည် စတိ တပ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ့ရဲ့ အယူအဆ အရတော့ ဒီမြို့ဟောင်းလေးဟာ တောင်ငူ ၅၂မြို့ထဲမှာ ပါခဲ့တဲ့ မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီမြို့လေးရဲ့ ပုံသဏဿဌာန်ဟာ မှန်ကူကွက်ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ အလျားတစ်ဘက်ဟာ ၁၃၉၅ပေလောက်ရှိပြီး အနံက ၉၈၄ပေ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြို့ခွင် ဧရိယာဟာ ၃၂ဧကခန့် ရှိပါသတဲ့။ မြို့ရိုးရာတွေလည်း ထင်ရှားစွာ ရှိသေးတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဆရာဦးအောင်မြင့်ရဲ့ ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံများမှ မြန်မာ့ရှေးဟောင်း မြို့တှောများ စာအုပ်ကို ထုတ်ခဲ့တာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်ကပါ။ အောက်ကပုံမှာတော့ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အဲဒီ မြို့ဟောင်းနေရာလေး ပြောင်းလဲသွားပုံကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နေပြည်တှောကို ရောက်ဖြစ်ပေမယ့် အဲဒီနေရာက စစ်ရုံးဘက် သွားရာ လမ်းဖြစ်တာမို့ အခုဆောက်ထားတဲ့ အဆောက်အဦဟာ ဘာလဲဆိုတာ ကျွန်တှော သေချာ မသိပါဘူး။ မြင်ရတဲ့ ပုံစံအရတော့ တှောတှောကြီးတဲ့ ပြတိုက်လို၊ ခန်းမလိုမျိုး တစ်ခုခု ဖြစ်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ အဆောက်အဦရဲ့ နယ်နိမိတ်ဟာ ယခင် မြို့ဟောင်းရဲ့ အပှေါမှာ တည့်တည့်ကျနေရုံမက ဧရိယာအနေနဲ့ ပိုတောင် ပိုပါသေးတယ်။ အသစ်အသစ်တွေ ရောက်လာတဲ့အခါ အဟောင်းအဟောင်းတွေဟာ ကွယ်ပျောက်သွားကြတာ ဓမဿမတာပါပဲ။ ဒါပေမယ် ဒီမြို့ဟောင်းလေးဟာ ဘာလဲဆိုတာ သေသေချာချာ မသိရခင်မှာ အခုလို ပျောက်ကွယ်သွား ရတာကိုတော့ သမိုင်းတန်ဖိုးအရ နှမြောနေမိတာပါပဲ။
Ref: ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံများမှ မြန်မာ့ရှေးဟောင်း မြို့တှောများ၊ ဦးအောင်မြင့်၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ၁၉၉၈
Posted by NLS at 9/16/2009 11:47:00 PM0comments Links to this post
Labels: Knowledge, Record, Selection
Laptop က ပါဝါပျက်ပျက်ကျနေလို့ မြေနီကုန်း KMD မှာ ၁၀ ရက်နေ့က သွားအပ်တယ်။ Bad Sector ဖြစ်နေတယ် ထင်လို့ HD ကို စစ်ပေးပါလို့ လိုအပ်ရင်လည်း HD အသစ်လဲပေးဖို့ မှာပါတယ်။ Recovery Console တစ်ခုလုံးက စက်ထဲမှာပဲ ရှိနေတာမို့ အဲဒါလေး ဂရုစိုက်ဖို့လည်း မှာရပါတယ်။ သူတို့က ၂ရက်ခွာပြီး ချိန်းတယ်။ ၁၂ရက်နေ့ မေးတော့ အရင် HD နဲ့ စမ်းသပ်နေတုန်းပဲတဲ့။ မရသေးဘူး ပြောတယ်။ ၁၄ရက်နေ့မှာ ထပ်မေးတယ်။ HD မကောင်းတာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဝင်းဒိုး ပြန်တင်လိုက်တာ ကောင်းသွားပြီတဲ့။ Drivers တွေကိုတော့ ဒေါင်းလုဒ် ချရမှာမို့ စောင့်ရမယ်လို့ ပြောတယ်။ အင်း ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ စောင့်ရမှာပေါ့။ ဒါနဲ့ ဒီမနက် ဖုန်းဆက်လာပြန်တယ်။ HD မကောင်းဘူးတဲ့။ လဲရမယ်တဲ့။ လူက ဒေါသတှောတှော ထွက်လာပါတယ်။ မနေ့ကပဲ ဝင်းဒိုးတင်ပြီး ဘာမှ လဲစရာ မလိုဘူး ကောင်းတယ် ပြောတယ်။ အခု မကောင်းဘူး ဖြစ်ပြန်တယ်။ သူတို့ 320Gb Seagate နဲ့ စမ်းတင်ကြည့်ထားတာ ကောင်းတယ်တဲ့ လဲမလားပေါ့။ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ လဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် 320Gb မလိုအပ်လို့ 250Gb နဲ့ ပြောင်းပေးပါလို့ ပြောပါတယ်။ သိပ်မကြာဘူး ဖုန်းပြန်ဆက်လာတယ်။ အကို့စက်က HD လဲလည်း မကောင်းဘူးတဲ့ မားသားဘုတ် ထိတာတဲ့။ မူရင်းဝယ်တဲ့ဆီကို ပြန်ပို့ပြီး ပြင်မှ ရမယ်လို့ ပြောလာတယ်။ ကျွန်တှော တှောတှော့ကို ဒေါသထွက်သွားပါတယ်။ ဒါဆိုဘာလို့ တစ်ရက်တစ်မျိုး အမျိုးမျိုး ပြောနေတာလဲလို့ ပြောမိပါတော့တယ်။ သူတို့ ပြောသလိုသာ MB ထိနေတယ် ဆိုရင် မနက်ကသာ 320Gb နဲ့ ရပြီဆိုလို့ သွားယူမိရင် ပိုက်ဆံ ၆၅၀၀၀+ Service Charges ပေးရမယ့်အပြင် ခဏနေရင် ပြန်ဖြစ်မှာ သေချာနေပြီပေါ့။ ဒါကို ဘာလို့ အမျိုးမျိုး ပြောနေတာလဲဆိုတာ ကျွန်တှော စဉ်းစားလို့ မရဘူး။ ကိုယ့်စက်လည်း မဟုတ်ဘူး သူများစက်ဆိုတော့ သူတို့က ကောင်းပြီပြောလိုက် ကိုယ်က ဘာမှလဲစရာ မလိုဘူးလို့ ပြန်ပြောလိုက်၊ သူတို့က HD လဲရမယ်ပြောလိုက် ကိုယ်က HD တော့ လဲရမယ်ဆိုပြီး ပိုက်ဆံတောင်းလိုက်နဲ့ အခု မရဘူးဆိုတော့ ကြားထဲက မျက်နှာပျက်ရပါတယ်။ စောင့် ဆိုလို့လည်း စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်နေတာပဲ။ တောက်။ နောက်ဆုံးတော့ သောက်ချိန် ကုန်တာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ ကျွန်တှောတို့လို Customer တစ်ယောက် လျှော့သွားလို့ သူတို့ စီးပွားရေး မထိခိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Service ဆိုတာကြီးကိုတော့ တှောတှော စိတ်ပျက်သွားမိတယ်။ ဆရာဦးသောင်းတင်တော့ အားနာပါရဲ့ ဒါပေမယ့်လည်း မတတ်နိုင်ဘူး။ ကိုယ်တွေ့မို့ ဒေါသ တှောတှော ထွက်နေတယ်။
Posted by NLS at 9/15/2009 11:44:00 AM 1 comment Links to this post
Posted by NLS at 9/15/2009 01:40:00 AM3comments Links to this post
သားစိုးရဲ့ ရှိုးပွဲအတွက်ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းက ဒီဇိုင်း လာလုပ်ခိုင်းပါတယ်။ စီစဉ်သူတွေက ငယ်ပေါင်းကြီးဖှော (ငယ်ငယ်ကတည်းက ပေါင်းလာပြီး သိထားသမျှ အတွင်းရေးကို ကြီးလာသောအခါ ဖှောသောသူများ) တွေ ဖြစ်တာမို့ ငြင်းလို့ကလည်း မရပါဘူး။ ပေးတဲ့အချိန်က တစ်ရက်တဲ့။ ပေးလာတဲ့ ဓာတ်ပုံက လက်မလောက် ပုံလေးတွေနဲ့ သူတို့ မျက်စိထဲ ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ပုံတွေ။ ပြီးတော့ ပြောသေးတယ်။ ရှိတာနဲ့ ရအောင်လုပ်တဲ့။ ဒါနဲ့ ဘယ်ရမလဲ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ လျှောက်ပြောပြီး မူရင်းမကောင်းရင် မိတဿတူမကောင်းနိုင်ဘူး ဘာညာနဲ့ ခြိမ်းခြောက် လိုက်တော့မှ အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်ပုံလေးအချို့ ထပ်ရောက်လာတယ်။ ပို့လာသမျှ ပုံတွေက သားစိုး နတ်ကတှော အဝတ်အစားနဲ့ ပုံတွေချည်းပဲ။ ဒီဇိုင်နာ တစ်ယောက်အတွက် အနေအထား အမျိုးမျိုးက ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံအမျိုးမျိုး ရဖို့ လိုအပ်တာလည်း ဒင်းတို့ မသိဘူး။ အဲဒီတော့ သားစိုးပုံ ရှိနိုင်တဲ့ လူတွေကို အကူအညီတောင်းရတယ်။ People က ကိုလမင်းနိုင်က သူရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ ပြပါတယ်။ ဒါနဲ့ သုံးပုံလောက် ယူလာခဲ့တယ်။ မနဿတလေး ရွှေကျောင်းမှာ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေလည်း ပြန်ရှာရတယ်။
ဘှောဒါများက နတ်ကတှောပုံကို အသားမပေးချင်ပါဘူးတဲ့။ ကျွန်တှောကတော့ မရဘူး။ အဲဒီပုံကို သေချာ ဖြတ်ညှပ်ကပ်ပြီး ဒီဇိုင်းလုပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ အရောင်ကို အဓိက ထားတယ်။ Tradition+Street Style ဖြစ်အောင် Layout ချတယ်။ သူတို့တော့ မသိပါဘူး။ ကျွန်တှောတော့ တှောတှောပင်ပန်းသွားတယ်။ ဒီဇိုင်း လုပ်တာထက် အဲဒီဒီဇိုင်းကို သူတို့ဆီပို့ဖို့ အပ်လုဒ် လုပ်တာက ပိုပင်ပန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပြီးသတ်ချိန်မှာတော့ ဒီဒီဇိုင်းလေးကို တှောတှော သဘောကျသွားတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ မြန်မာတစ်ယောက် လုပ်တဲ့ပွဲမို့ သေသေချာချာ အပင်ပန်းခံ လုပ်ခဲ့တာပါ။ အမြတ်ထွက်ရင်တဲ့ IPhone တစ်လုံး လက်ဆောင် ပို့လိုက်မယ်ဆိုလား ပြော(ဖော?) သွားပါသေးတယ်။ ကျန်းမာပါစေ။
Posted by NLS at 9/12/2009 04:45:00 AM0comments Links to this post
မဖွင့်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ သေတဿတာတစ်လုံးကို ဖွင့်မိတော့ ပျောက်သွားပြီလို့ မှတ်ထင်ထားတဲ့ ဆရာကြီး ဦးလွန်းကြွယ်ရဲ့ ပန်းချီစာအုပ် ပြန်ထွက်လာလို့ အရမ်းကို ဝမ်းသာသွားမိတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ကျွန်တှော အိနဿဒိယမှာ ရှိနေစဉ်က အန်တီသီတာအောင်က လက်ဆောင် လှမ်းပို့ပေးခဲ့တာပါ။ ဒီစာအုပ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် Thavibu Gallery Co.Ltd ကနေ ထုတ်ခဲ့တာပါ။ ဆရာကြီးရဲ့ ပန်းချီကားပေါင်း ၆၂ကားတိတိ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆရာကြီးရဲ့ အကောင်းဆုံး ပန်းချီလက်ရာ စုစည်းမှုလို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေး ပျောက်သွားပြီထင်လို့ အင်းဝစာအုပ်တိုက်မှာ ရောင်းတာမြင်တော့ ပြန်ဝယ်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒှေါလာ ၄ဝကျှောတယ် ထင်ပါရဲ့ ကိုယ်မတတ်နိုင်တဲ့ ဈေးမို့ လျှောက်ပြန်သံပေး ခြေအေးဝမ်းရောင်ပဲ နေခဲ့ရတယ်။ ဒီနေ့ ပြန်တွေ့တော့ ချက်ချင်းပဲ Digitize လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ ဆရာကြီးရဲ့ နာမည်ကျှော Nude ပုံတွေ မပါဝင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အရမ်းသွက်လက်တဲ့ စုတ်ချက်တွေကို မြင်တွေ့ခံစား နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပန်းချီဝါသနာရှင်တွေ ခံစားနိုင်အောင် အမြည်းလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တှော အကြိုက်ဆုံးကတော့ အစိမ်းရောင် အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်ရဲ့ ပုံပါပဲ။ ပျှောရွှင်ပါစေ။
U Lun Gywe - A Master Painter From Myanmar
Edited by Jorn Middelborg
Hard Cover, 84 pages
2005, Thailand, 1st Edition
Published by Thavibu Gallery Co.Ltd
See more some of U Lun Gywe paintings at
Posted by NLS at 9/10/2009 01:24:00 AM 1 comment Links to this post